Erdogan oo ku tilmaamay siyaasadaha Isra’iil ee ku wajahan Falastiinyiinta falal isir takoor ah - Horn Future
Istanbul (AFP)-Madaxweynaha Turkey Rajap Dayyip Erdogan ayaa ku tilmaamay siyaasadaha Isra’iil ee ku wajahan xagga Falastiinyiinta falalkii takoorka ahaa ee uu fulin jiray taliskii midab- takoorka ahaa ee Koonfur Afrika.
Madaxweynaha Turkey ayaa tilmaamay doodda ku saabsan suurtagalnimada in safaaradda Mareykanka ee magaalada Tel Aviv loo wareejiyo Qudus ay tahay arrin «sida uu u dhan yahay meesha aanan ku jirin»oo khasab ay tahay in la joojiyo.
Erdogan ayaa waxa uu ku baaqay mar uu intii lagu guda jiray shir ka dhacay Istanbul baahida loo qabo in digtooni laga yeesho arrimaha ku saabsan xaaladda la xidhiidha Qudus,waxana uu carabka ku adkeeyay oo uu yidhi «kaliya in dhagax meel loo wareejiyo,waxa dhici karta inay reebto cawaaqib xumo halis ah».
Waxa uu intaa ku daray «doodda ku saabsan suurtagalnimada in safaarada Mareykanka ee Israa’iil loo wareejiyo Qudus waa arrin sida uu u dhan yahay meesha aanan ku jirin»,sida dhabta ahna waa in laga saaraa meesha hadal haynteeda.
Erdogan ayaa sidoo kale isla hadalkan uu jeediyay ku tilmaamay siyaasadaha Isra’iil ee ku wajahan xagga Falastiin kuwo lamid ah falalkii cunsurinimada ahaa ee uu fulin hoos taliskii midab takoorka ee Koonfur Afrika.
Mar uu ka hadlayay sharciga Isra’iil ee ku baaqaya in la joojiyo dhawaqa eedaanka ee salaadda waxa isaga oo Isra’iil la hadalaya ku yidhi”haddii aad tihiin kuwo ku kalsoon waxaad aaminsan tihiin,waa in aanad ka baqin xoriyadda waxa la aaminsan yahay,annaku waxaan ku kalsoon nahay waxa aan aaminsan nahay, sidaas daraadeed cabsi nagama hayso xoriyadda waxa la aaminsan yahay,” .
Waxa Erdogan u arkaa in aynan suuro gal ahayn in la hubiyo in nabad iyo xasillooni ka dhacda gobolka hadii aanan xal loo helin arrinta Falastiin.
Waxa Erdogan uu sheegay in marka hore loo baahanahay in la ixtiraamo shuruucda caalamiga ah iyo qaraarada,mana dhici karto buu yidhi qofkii uu dooni ha ahaado ama dalka uu dooni ha ahaado in uu ka sareeyo sharciga.
Erdogan ayaa ku tilmaamay sharciyadda cusub ee siyaasadeed ee Xamaas inay yihiin talaabooyin muhiim ah oo loo qaaday ama ha ahaato arrinta Falastiin ama ha ahaato heshiis u dhexeeya Xamaas iyo Fatax.
« Gudoomiyaha Jakarta oo lagu xukumay 2 sano ah kadib aflagaado uu u gaystay diinta Islaamka	» Ururka ISIL oo baahiyay muuqaal sarkaal katirsan sirdoonka Russia uu qoorta ka gooyay